Hippo Water Roller hanamorana ny mponina any ambanivohitra hitondrana rano - AFRIKHEPRI
Hippo Water Roller hanamorana ny mponina any ambanivohitra hitaterana rano
I Pettie Petzer sy Johan Jonker, Afrikana Tatsimo, dia namolavola vongana fitahirizana taona vitsy lasa izay mba hanamoràna ny fitaterana ny rano ho an'ny mponina ambanivohitra. Ny havoakan'ny Rano Hippo, araka ny nanononany azy, dia ny rano manatsara izay manamaivana ny fitaterana ny rano sarobidy ary izany, na dia eo aza ny lanjan'ny habetsaky ny rano raketiny. Raha ny marina, amin'ny fampiasana ny teknika indostrialy fantatra amin'ny hoe fanodinana rotation, ireo mpanafika roa dia nanao fiaramanidina plastika solaitraina tsy misy angadinomby na kofehy. Ity dingana ity, izay miantoka ny fanamafisana ny tontolon'ny fiaramanidina manontolo, dia namela azy ireo hampiditra tànana sy hamadika azy ireo amin'ny kodiarana. Noho izany, nanolotra ny tenany ho toy ny karazan-koditra izay misy kodiarin'ny rano ny kodiaran'ny hippo. Ary ny vokatra amin'ny fe-potoam-pilaminana ny fotoana sy ny angovo dia tena mahavariana: ity hevitra revolisionera ity dia ahafahana mitondra fifamoivoizana, mankany amin'ny rano iray 90L ho an'ny entana mavesatra akaikin'ny 10kg.
Nandritra ny taona maromaro izao, ity fanavaozana ity dia nanatsara ny fiainan'ny olona any ambanivohitra izay matetika no voatery mitondra rano amin'ny lava-lava lava mba hamerenana azy ireo any an-tranony. Mampahatsiahy antsika i Le Monde fa ny fitaterana rano dia mampiseho ora X4Xm isan'olona isan'andro. Asa iray nentina nanoloana ny vehivavy sy ny tovovavy any Afrika.
Nahoana ny Afrikana no mila mamaky boky ho an'ny zanany?
Tohano ny Afrikhepri - Manorata
Ny fahaizan'ny fitiavana - Don Miguel Ruiz (Audio)